paompy submersible stainless vy
Pompeo slurry hydraulique
Paompy Froth mitsivalana
Type UHB-ZK Pompeo fotaka mahatohitra harafesina
VS Vertical Somp Slurry Pump
QJ Stainless vy tsara submersible paompy (lalina paompy) Mombamomba ny vokatra
QJ-karazana submersible paompy dia maotera sy ny rano paompy mivantana ao amin'ny rano ho amin'ny asan'ny rano manandratra fitaovana, dia mety amin'ny fitrandrahana avy amin'ny lalina ny rano ambanin'ny tany azo ampiasaina ho an'ny renirano, fitahirizana, tatatra sy ny rano hafa manandratra tetikasa: indrindra ho an'ny fanondrahana tany fambolena sy tendrombohitra lembalemba Ny ranon'olombelona sy ny biby, fa koa ho an'ny tanàna, orinasa, lalamby, toeram-pitrandrahana, toerana fampiasana rano.
QJ Stainless vy tsara submersible paompy (lalina paompy) endri-javatra
1. maotera, paompy rano iray, mitsambikina ao anaty rano mba hihazakazaka, azo antoka sy azo antoka.
2. Tsy misy fepetra manokana ho an'ny fantsakana sy ny fantson-drano (izany hoe, ny fantsakana vy, ny lavadrano lavenona, ny tany tsara sy ny sisa dia azo ampiasaina; eo ambanin'ny fahazoan-dàlana tsindry, ny fantsona vy, ny hose, ny fantsona plastika sy ny sisa dia mety ho toy ny fantsona rano).
3. Fametrahana, fampiasana, fikojakojana mora Tsotra, dian-tongotra kely, tsy mila manangana efitrano paompy.
4. Rafitra tsotra, mitahiry akora.
Ny fampiasana paompy an-dranomasina ny fepetra dia mety, fitantanana araka ny tokony ho izy ary ny fiainan'ny fifandraisana mivantana.
QJ Paompy vy vy tsy mety milentika (paompy lalina) conditions ny fampiasana
QJ-karazana Ny paompy submersible dia azo ampiasaina tsy tapaka amin'ireto fepetra manaraka ireto:
1. Famatsiana herinaratra AC telo-dingana miaraka amin'ny fatran'ny laharana 50HZ ary 380 ± 5% V.
2. Ny fidirana amin'ny paompy dia tokony ho 1 metatra ambanin'ny haavon'ny rano mihetsika, fa ny halalin'ny fitsirihana dia tsy tokony hihoatra ny 70 metatra ambanin'ny haavon'ny hydrostatic. Ny faran'ny motera dia farafahakeliny 1 metatra ambonin'ny halalin'ny rano ambany.
3. Ny hafanan'ny rano amin'ny ankapobeny dia tsy mihoatra ny 20 ℃.
4. Ny fepetra takian'ny kalitaon'ny rano: (1) tsy mihoatra ny 0,01% ny votoatin'ny rano amin'ny rano (lanja lanja);
(2) PH sanda amin'ny isan-karazany ny 6.5 ~ 8.5;
(3) klôro afa-po tsy mihoatra ny 400 mg / l.
5. Mitaky sanda tsara, ny rindrina dia malama, tsy misy tsara staggered.
QJ Stainless vy tsara submersible paompy (lalina paompy) famaritana ara-drafitra
1.QJ-karazana paompy submersible vondrona ahitana: rano paompy, submersible maotera (anisan'izany ny tariby), rano fantsona sy ny fanaraha-maso switch ahitana faritra efatra.
paompy submersible ho an'ny single-suction multi-dingana mitsangana centrifugal paompy: submersible maotera ho an'ny mihidy feno rano mando, mitsangana telo-dingana tranom-borona asynchronous maotera, maotera sy paompy amin'ny alalan'ny claw na tokana amponga coupling mivantana; fitaovana amin'ny famaritana samy hafa ny telo Core tariby; manomboka fitaovana ho an'ny fahaiza-manao isan-karazany haavon'ny rivotra switch sy ny tena-decompression starter, ny rano fantsona ho an'ny samy hafa savaivony ny sodina vy vita amin'ny flange fifandraisana, avo-fanandratana paompy amin'ny vavahady fanaraha-maso.
2. Paompy submersible Ny dingana tsirairay amin'ny baffle dia asiana fingotra mitondra; ny impeller dia raikitra amin'ny tobin'ny paompy miaraka amin'ny tanany manify; kofehy na bolted ny baffle.
3. High-lift submersible paompy misy valva fanamarinana eo amin'ny tapany ambony, mba hisorohana ny downtime vokatry ny fahasimban'ny ny vondrona.
4. Sobika maotera an-dranomasina miaraka amin'ny labyrinth sandstand sy roa mifamadika amin'ny tombo-kase menaka taolana, mba hisorohana ny fikorianan'ny fasika ao amin'ny maotera.
5. Submersible maotera amin'ny rano lubricated bearings, ny tapany ambany amin'ny fingotra fanerena mandrindra sarimihetsika, fanerena mandrindra lohataona, ahitana surge efitra, hanitsy ny tsindry vokatry ny hafanana fiovana; maotera miolikolika amin'ny polyethylene insulation, nylon palitao maharitra mpanjifa entana rano , Cable fifandraisana amin'ny alalan'ny QJ-karazana tariby connector teknolojia, ny connector insulation eny kikisana loko sosona, dia mifandray, welding mafy, miaraka amin'ny manta fingotra manodidina ny sosona. Ary avy eo nofonosina amin`ny rano-mahatohitra adhesive kasety 2 ka hatramin`ny 3 sosona, ivelan`ny fonosana eo amin`ny 2 ka hatramin`ny 3 sosona ny tantera-drano kasety na lakaoly amin`ny sosona ny fingotra kasety (bisikileta fehin-kibo) mba hisorohana ny rano seepage.
6. Ny motera dia voaisy tombo-kase, voaisy tombo-kase amin'ny bolt fijanonana mazava tsara sy ny fivoahana tariby.
7. Ny tendrony ambony amin'ny motera dia misy lavaka fantson-drano, misy lavaka fantson-drano, ny ampahany ambany amin'ny lavaka rano.
8. Ny tapany ambany amin'ny maotera miaraka amin'ny tosika ambony sy ambany, tosika mitondra eo amin'ny alokaloka mba hampangatsiaka, ary manoto takelaka vy tsy misy vy, miaraka amin'ny paompy miakatra sy midina axial hery.
QJ Stainless vy tsara submersible paompy (lalina paompy) fitsipika miasa
Alohan'ny hanokafana ny paompy dia tsy maintsy feno rano ny fantsona sy ny paompy. Aorian'ny paompy dia mihodina amin'ny hafainganam-pandeha avo ny impeller, ary mihodina miaraka amin'ny lelany ny ranon-javatra. Eo ambanin'ny hetsika ny centrifugal hery, dia mamela ny impeller ivelany sy ny ranon-javatra dia miadana tsikelikely ary ny tsindry mitombo tsikelikely avy amin'ny paompy Export, fivoahana fantsona fivoahana. Amin'izao fotoana izao, eo afovoan'ny lelany eo afovoan'ny ranon-javatra dia atsipy any amin'ny manodidina ary ny fananganana ny tsy misy rivotra sy ny tsy misy ranon-javatra vacuum faritra tsindry ambany, ranoka dobo ao amin'ny dobo fanerena ny atmosfera eo ambanin'ny hetsika ny suction. fantsona ao amin'ny paompy, ny ranon-javatra dia tsy mitsaha-mitombo.
QJ Stainless vy tsara submersible paompy (lalina paompy) use sy ny toetra
QJ-karazana submersible paompy dia mifototra amin'ny fenitra nasionaly natao angovo-mamonjy vokatra, be mpampiasa amin'ny toeram-pambolena fanondrahana, orinasa indostrialy sy ny harena ankibon'ny tany ho an'ny famatsiana rano sy ny tatatra, lembalemba, olona tendrombohitra, rano fiompiana.
Ny paompy dia ahitana paompy QJ submersible sy YQS submersible maotera ao anaty rano iray mba hiasa anaty rano. Miaraka amin'ny rafitra tsotra, habe kely, lanjany maivana, fametrahana, fikojakojana mora, fandidiana azo antoka, azo itokisana, mahomby amin'ny angovo sy ny sisa.
QJR andian-fantsakana miaraka amin'ny hafanana-mahatohitra submersible paompy dia tsara amin'ny hafanana-mahatohitra antsitrika telo-dingana asynchronous maotera mivantana ho iray, nivory tao amin'ny hafanana-mahatohitra submersible paompy, rano mafana mari-pana hatramin'ny 100 ° C, dia rendrika ao amin'ny fantsakana. , Ny rano dia fitaovana mahomby; geothermal dia iray amin'ireo angovo farany mora indrindra, madio, tsy mety ritra, ampiasaina betsaka amin'ny fanafanana, fitsaboana, fandroana, fiompiana, fambolena, indostria sy fambolena, orinasa sy toeram-pitrandrahana, serivisy fialamboly, tobim-pahasalamana, lafiny. Izy io dia manana tombony amin'ny fandidiana tsotra, asa azo antoka, tsy misy tabataba, fampisehoana tsara, fahombiazana ambony amin'ny tarika, fametrahana mora sy fikojakojana. Manana tombony maro izy io toy ny fanoherana ny hafanana, ny fanoherana ny harafesina ary ny fanoherana ny fahanterana. Io no vokatra farany amin'ny rano mafana embankment.
1. Fampiasana mitsangana, toy ny ao anaty lavadrano mahazatra;
2. Fampiasana oblique, toy ny any amin'ny toeram-pitrandrahana misy lalana mitongilana;
3. Fampiasana mitsivalana, toy ny ao anaty dobo
QJ Paompy elektrika an-drano ho an'ny fantsakana (pompeo lalina) Fitandrina
1. Tsara submersible paompy dia tokony ho ampiasaina ao amin'ny fasika afa-po ny latsaky ny 0,01% ny loharanon-drano, ny paompy efitrano misy fitoeran-drano mialoha ny rano, ny fahafaha-manao dia tokony hihaona amin'ny fanombohan'ny rano mialoha.
2. Vaovao na overhauled lalina paompy, tokony hanitsy ny paompy akorany sy ny impeller fahazoan-dalana, ny impeller amin'ny asa dia tsy friction amin'ny akorany.
3. Ny paompy fantsakana lalina dia tokony hivoaka alohan'ny hidiran'ny rano ao anaty lavaka ary mitondra ny akorany ho an'ny fandehanana mialoha.
4. Alohan'ny hanombohan'ny paompy fantsakana lalina dia tokony hahafeno ireto fepetra manaraka ireto ny zavatra fanaraha-maso:
1) henjana ny bolts fototra;
2) axial fanalefahana mifanaraka amin'ny fepetra, manitsy ny bolt voanjo efa napetraka;
3) mihenjan-droa sy misoroka ny fihary famonosana;
4) ny maotera bearings no lubricated;
5) Mihodina ny motera rotor ary mijanona amin'ny tanana dia malefaka sy mahomby.
5. Ny paompy fantsakana lalina dia tsy afaka mijanona raha misy rano. Paompy Ny impeller iray na roa dia tokony atsoboka ambanin'ny haavon'ny rano 1m. Ny fandidiana dia tokony hijery foana ny fiovan'ny haavon'ny rano ao amin'ny fantsakana.
6. Nandritra ny fandidiana, rehefa mahita vibration lehibe manodidina ny fototra, dia tokony hijery ny paompy mitondra na motera filler akanjo; rehefa tafahoatra akanjo sy leakage, dia tokony hanolo ny tapa-ny vaovao.
7. efa notononina, tatatra amin'ny fotaka lavaka lalina paompy, alohan'ny hampijanonana ny paompy, ny fampiharana ny rano kobanina.
8. Alohan'ny hampijanonana ny paompy dia tokony hanidy ny valva rano ianao, tapaho ny herinaratra, hidio ny boaty switch. Rehefa kilemaina ny ririnina dia tokony hapetraka ao anaty paompy ny rano.
Disclaimer: Ny fananana ara-tsaina aseho amin'ny vokatra voatanisa dia an'ny antoko fahatelo. Ireo vokatra ireo dia atolotra ho ohatra fotsiny amin'ny fahaiza-mamokatra, fa tsy amidy.
teo aloha: Orinasa mpanondrana paompy gravel tsara indrindra any Shina - Paompy kapila fanamafisam-tena nohatsaraina karazana SYB – Boda
Manaraka: Antiabrasive Slurry Value
Paompy rano 12v
Paompy rano 1 hp
Paompy rano 2 hp
Paompy rano 5 hp
Paompin-drano mandeha ho azy
Paompy rano mandeha amin'ny bateria
Paompy rano mangatsiaka
Dc paompy rano
Paompy rano Diesel
Paompin-drano mitsoka roa
Paompy rano zaridaina
Paompy rano mandeha entona
Paompy rano gasy
Paompy rano tanana
Paompy rano fanerena avo
Paompy rano marindrano
Paompy rano mafana
Paompy Mihodina rano mafana
System Recirculating rano mafana
Paompy rano manual
Paompy rano metaly
Rv paompy rano
Paompin-drano mandeha amin'ny herin'ny masoandro
Paompy loharanon-dranon'ny masoandro
Paompin-drano anaty rano
Paompy misy rano
Paompin-drano mandeha amin'ny rano
Paompy fanerena tosidra
Aquarium paompy rano
Paompy rano ho an'ny trano
milina paompy rano
Satroka fingotra paompy rano
Tombo-kase fingotra paompy rano
Tobin-drano misy paompy
Paompy rano tsara
Abrasive slurry paompy faritra Slurry Pump Impeller
Paompy maloto PWL
Spare kojakoja paompy slurry
Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd dia orinasa miasa ho an'ny tsena iraisam-pirenena paompy ao PRC. Izy io dia miasa indrindra amin'ny paompy & paompy fitaovana entin'ny, paompy ampahany & fanoherana manao castings, hafa hydraulic milina, kojakoja sns.